Category: လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | Invest Myanmar Summit 2019
မြန်မာ့လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း – မြန်မာ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်နိုင်ပါမည်လော
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း / By zawgyi
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် အိမ်တိုင်းမီးလင်းစေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မကြာမီပင် အာဏာရ National League for Democracy (NLD) အစိုးရသည် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်စေရန် အဓိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်က တိုတောင်းသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ပြဿနာမှာ ကျယ်ပြန့်သည်၊ ရှုတ်ထွေးသည် အရေးကြီးဆုံးကတော့ အလွန်အကုန်အကျများလှပါသည်။ မြန်မာအစိုးရက ၂၀၃၀ တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ အမျိုးသားပါဝါလိုင်း (national grid) နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုတွင် ၂၂.၇ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့လျော့ခန့်မှာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိကြသေးချေ။ လျှပ်စစ်သုံးစွဲခွင့်မရကြသော ကျေးရွာများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသားပါဝါလိုင်းနှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာမျှပင် မကွာဝေးသောနေရာ၌ရှိနေကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဖယောင်းတိုင်၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးမီးဖိုနှင့် …
မြန်မာ့လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း – မြန်မာ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်နိုင်ပါမည်လောRead More »
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ “ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနေမှုအခြေအနေ ဆန်းစစ်လေ့လာချက် ၂၀၁၇” အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၈ % သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စု ၁၀ ခုတွင် ၆ ခုသည် အများပြည်သူသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကွန်ယက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိသေးပါ။ ဤအခြေအနေမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် အလွန်ကွာဟနေပေသည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့် တတ်နိုင်သည့်အဖြေမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ရှေ့တန်းမျက်နှာစာတွင် တိုးတက်မှုရှေ့တန်းရောက်စေသည့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများမှာ ဘာတွေလဲ။ ပိုမိုသိရှိရန် ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုပါ။
ရေနံနှင့် သဘောဝဓာတ်ငွေ့အတွက် သဘောတူညီချက်အသစ်
မြန်မာအစိုးရသည် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော ကန်ထရိုက်များ၏ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုက လုပ်ငန်းတွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုအားပေးသည့် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ မြန်မာ့လူဦးရေ၏ တိုးပွားလာသည့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရရှိသေးသည့် အိမ်ထောင်စုများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းသည် များစွာတိုးချဲ့ရန် လိုအပ်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုလျှင်….
According to the Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar received its first foreign investment in the power supply sector. Construction of the new 145-megawatt plant is set to begin in 2019. This gas-fired plant will be built in Singaing Township inajoint venture between China’s Power Gen Kyaukse and two Myanmar companies. The …
Myanmar Gets First Foreign Investments for Power Projects in Fiscal Year TransitionRead More »
ဒေသ – ရှမ်းပြည်နယ်